Beesha Caalamka oo ku baaqday in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Beesha Caalamka oo ku baaqday in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo
Saaxiibada caalamka ee Somaliya ayaa ku baaqay in doorashada dalka ka socoto ay noqoto mid daahfuran, xor iyo xalaal leh, dadkuna ay u dhan yihiin.
Warsaxaaadeed ay si wadajira u soo saareen saaxiibada caalamiga ee Somaliya ayaa ku baaqay in doorashadu noqoto mid ay aqbali karaan dhammaan daneeyeyaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeedba.
“Waxaan ku baaqaynaa in daah-furnaan buuxda loo sameeyo dhammaan geeddi-socodyada la xiriira, oo ay ku jiraan magacaabista guddiga soo xulista, xulista ergada, diiwaangelinta musharaxiinta, kuraas u xirirsta haweenka musharraxiinta ah, si loogu hoggaansamo qoondada boqolkiiba soddon ee lagu heshiiyay iyo maareynta lacagaha musharaxiinta. Waxa aanu sidoo kale ugu baaqaynaa Guddiyada Doorashada inay fududeeyaan korjoogeynta dhammaan hawlaha goobaha cod bixinta.” Ayaa warsaxaafadeedka lagu sheegay.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in la tixgeliyo xaqa ay musharaxiinta u leeyihiin inay isu soo taagaan kuraasta Golaha Shacabka, lana helo tartan dhab ah.
Sidoo kale musharaxiinta iyo ergada cabaneysa ayaa loogu baaqay inay soo gudbiyaan wixii tabasho ah oo la xiriira doorahada, iyagoo u maraya hababka sharciga ee u degsan doorashada.
“Waxaan ku dhiirigelinaynaa ergooyinka iyo musharrixiinta doonaya inay soo gudbiyaan cabashooyinka doorashada inay sidaas ku sameeyaan, iyagoo u maraya hababka sharciga ah ee loo sameeyay ujeedkan.” Ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa waxaa toddobaadkan horeeyay buuq iyo doodo ka dhashay musuq maasuq Guddiyada Doorashooyinka lagu eedeeyay inay ku sameeyeen xubno musharaxiin ahaa, isla-markaana ay bedeleen ergadii wax dooraneysay.
Warka Beesha Caalamka ayaa loo fasirtay mid ka tarjumaya, sida aanay ula dhacsanayn qaabka ay ku socoto Doorashada Golaha Shacabka.
Beesha Caalamka oo ku baaqday in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo was last modified: November 27th, 2021 by Admin
DEG DEG:-Dagaal oo goordhow ka qarxay Degmada Wanla-weyn